देश संघीय संरचनामा, अब कस–कसले पाउँछन् रातो पासपोर्ट ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
देश संघीय संरचनामा, अब कस–कसले पाउँछन् रातो पासपोर्ट ?
प्रकाशित मिति: ७ चैत्र २०७४, बुधबार
काठमाडौं – देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यसबाट बन्ने व्यवस्थाअनुसार क–कसले रातो पासपोर्ट पाउँछन् भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै टुंगो लगाएको छैन। संघीय संसद्का सांसदले रातो पासपोर्ट पाए पनि प्रदेशसभाका सांसदले यस्तो पासपोर्ट पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले विभागले राहदानीका सम्बन्धमा टिप्पणी पेस गरेको जनाउनुभयो।
‘नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, टिप्पणी सदर भएपछि मात्र के हुने हो भन्ने टुंगो लाग्छ’, खड्काले भन्नुभयो– ‘अहिले केही विशिष्टका नयाँ पदहरू थपिएका छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी नियमावली संशोधन हुन आवश्यक छ।’आजको नेपाल समाचारत्रको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।
केरौजाका घाइतेहरुको उद्धार गर्दै नेपाली सेना । तस्बिरः नेपाली […]
राजधानीबासीलाई दाउरा वेच्दै सरकार
कात्तिक २९ । काठमाडौं, भारतीय नाकाबन्दीसंगै मुलुकमा इन्धनको चरम संकट भएपछि सरकारले राजधानीबासीलाई आजबाट […]
काठमाडौं । मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरको निधन भएको छ । केही दिनअघि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका तुलाधरको […]
निर्वाचनपछि प्रतिपक्ष दलसँग छलफलको पक्रिया अघि बढाइने
असार १०, भीमदत्तनगर । नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुरले आज बिहान भीमदत्तनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा […]
रुस्लान क्रिकेट कपमा हिमालयन एकेडेमी विजयी
काठमाडौं। प्रथम रुस्लान ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट कप प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा हिमालयन क्रिकेट […]